Bahleli ekhaya abafundi abaxoshelwe ukuluka eSukuma | Eyethu News
Bahleli ekhaya abafundi abaxoshelwe ukuluka eSukuma
“Kuxoshwe thina kuphela abanye bayekiwe.”
Ibona labafundi abebehleli ngaphandle ngesikhathi sokufunda ngoLwesibili ngemuva kokuba bexoshiwe esikoleni. Isithombe :Lethiwe Makhanya
BAQUVE emakhaya abafundi ababili bebanga lika-grade 11 abafunda eSukuma Secondary school eMbali Unit 1 ngemuva kokuba bexoshwe esikoleni ngoLwesibili ngoba beluke umluko obheke emuva besebenzisa ama extention (Steps).
Labafundi esiwagodlile amagama abo bathi baxoshwe omunye wothisha kulesi sikole wathi abahambe baye esangweni bayoqaqwa okanye bahambe bayohlala emakhaya bangabuyeli esikoleni besaluke loku abakulukile.
Omunye wabafundi okhulume ne-Edendale Eyethu uthe okubaxakayo ukuthi bekungakona okokuqala bewuluka lomuluko kungashiwo lutho kodwa manje sebeyaxoshwa.
“Sihleli siluka kanje kungashiwo lutho ngoba futhi kuhlanzekile kuyakhombisa ukuthi okumfundi. Okusixaka kakhulu futhi ukuthi abanye abaxoshwanga kuxoshwe thina kuphela bona bayekelweni? Nangaphambi kokuba kuvalwe izikole uthishanhloko wayebabona mihla namalanga abantu abaluke kanje kodwa angasho lutho,” kubeka yena.
Uqhube wathi nakuba ezosala ezifundweni zakhe kodwa akazimisele ngokuqaqa. “Lomluko ukhokhelwe imali umama wami ongasebenzi kodwa wanginika imali yakhe ayithole kanzima ukuthi ngiluke nami ngihlanzeke ekhanda. Uma kungukuthi kuzomele ngihlale ekhaya kuze kuguge ngizohlala ngoba ngeke ngize ngiqaqe.”
Labafundi bathe abanaso isiqiniseko sesibalo sabafundi abaxoshiwe kodwa bathi abakwaziyo ukuthi akusibona bonke abaluke njengabo abaxoshiwe abanye bayekiwe.
Funda olunye udaba lapha :Itholwe isaphila ingane egqitshwe unina iphila
Okhulumela uMnyango wezeMfundo uMnu Muzi Mahlambi uthe bazolubhekisisa lolu daba ukuthi kwenzekeni yini ebe ngumsuka wokuthi kuze kuxoshwe labafundi.
“Sizolubhekisisa lolu daba sibone ukuthi bona labafundi bayilandelile yini imiyalelo okanye imithetho yesikole . Sizobheka ukuthi uma kungukuthi labafundi bayilandelile imithetho yesikole uthishanhloko ubebasuka ngalaphi ukuthi aze abaxoshe,” kubeka uMahlambi.